Izindaba - Izimakethe zivulwe e-Yiwu
Ngemuva kokuvulwa kwezimakethe ezinkulu ze-yiwu, osaziwayo abaningi bewebhu basakazwa bukhoma emakethe, abanye abanikazi bezitolo, abasizi bezitolo ngqo empini, abathengisi baba ngamahange, osaziwayo bewebhu basakaza bukhoma "bamba" ibhizinisi, baba igagasi elishisayo imakethe yeyiwu.
Ukuze kukhuthazwe ukuhlanganiswa kwe-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, idolobha lethu lihlele imisebenzi efana ne "e-commerce emakethe", "izimpahla ezilungile online", "usaziwayo wewebhu usakaza bukhoma intwasahlobo efudumele", "umbukiso online", njll. e-commerce yedolobha emakethe, futhi kwenziwa ukukhethwa okuqondile kwemikhiqizo, ama-oda nokuthengisa online. Abasebenza ezimakethe basungula isitolo endaweni yezentengiselwano ukukhulisa imakethe eku-inthanethi.
Idolobha lethu liheha ipulatifomu yokusakaza bukhoma, ama-ejensi osizo wewebhu nosaziwayo bewebhu abaziwa yiwu ku-yiwu, ukwenza ukusakaza bukhoma ngesenzo sezimpahla, kwinkundla yezokusakaza ebukhoma eyaziwayo, isikali sezinhlangano ezihlinzeka ngosizo losaziwayo bewebhu, ngokugeleza kwaso " osaziwayo bewebhu ", ngentela, ukuthengwa kwethalente, isikole sezingane okufanele sisekelwe. Iqembu lezitolo lizoba ngamamitha-skwele angama-25,000 "esikhungweni", singene epaki yezimboni ebukhoma yosaziwayo. Ngaphansi kokuholwa yinqubomgomo, abasebenza ezimakethe bashintsha indlela yokusebenza, "osaziwayo bewebhu" ngezimpahla, ukuthengisa okusakazwayo bukhoma ngokuthe xaxa.
"Esikhathini esikhethekile salo bhubhane, kubaluleke kakhulu ukuqondisa opharetha ukuthi bavule iziteshi ezintsha ezinjengokusakaza bukhoma ku-inthanethi, kusheshiswe ukubuya kwabathengi futhi kuthuthukise nokuzethemba kwemakethe." Umuntu ophethe iqembu lezitolo uthe lokhu kubheduka kuphoqe abanikazi bamabhizinisi ukuthi basheshise uguquko, "izingqinamba zokuhweba kwamanye amazwe ezithunyelwa kwamanye amazwe, abathengisi abaningi benyuse ukunwetshwa kwemakethe yasekhaya. Abanye babo bebejwayele ukwenza i-wholesale kuphela, kepha manje baqala ukunaka le ndlela entsha yokusakaza bukhoma online. "